မိုးလဝေသပညာရှငျ မစုစုစံရဲ့ ယနမေို့းခနျ့မှနျးခကျြ 🌧🌧🌧 – Moe Tauk Pan
မိုးလဝေသပညာရှငျ မစုစုစံရဲ့ ယနမေို့းခနျ့မှနျးခကျြ 🌧🌧🌧
24/05/2022 ရက်နေ့ ဧရာဝတီတိုင်းတွင် မိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပြီး မော်တင် ဟိုင်းကြီး လပွတ္တာငပုတော ပုသိမ် ငရုတ်ကောင်းဂေါ်ရင်ဂျီကျွန်း ငွေဆောင်ချောင်းသာ မိုးကြီးလေထန်နိုင်ပါတယ် ISSUED TIME 22/05/2022 at 6:46PM
Dust Strom သဲမုန်တိုင်း မေလ ၂၃ရက်လ၂၄ရက် ၂၅ရက်နေ့များတွင် ဆောဒီအာရေးဗီးယား အီရတ် ကူဝိတ် အီရန် ဆ​ရေိးယား သဲကန္ဒာရဒေသတွေမှာ သဲမုန်တိုင်းပြင်ပြင်ထန်ထန်တိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်
ကော့သောင်း ဘုတ်ပြင်းခမောက်ကြီး လုံဖော ကျေးရွာ ကရသူရိ တနင်္သာရီ တညက်ကျေးရွာ မြိတ် တိုရွာ ကျေက္ကာရွာ ပုလောမြို့ ဒေသတွေမှာ မိုးကြီးရေလျှံနိုင်ပါတယ် 🌧🌧🌧🌧
မွန်ပြည်နယ် 🌧🌧🌧🌧🌧 သံဖြူဇရပ် ကျိုက်ပိ ကရပ္ပိ အနင်းရွာ နှစ်ကရင် ကလဂုတ်ကျွန်း လမိုင်း သောင်ပြင် လေမိုးလျှပ်စီးမိုးကြိုး မိုး
ဒိုက်ဦး ပြွန်တန်ဆာ ညောင်လေးပင် လေမိုးလျှပ်စီးမိုးကြိုး မိုး Lightning: Cloud to ground, Power: 20kA (Strong slammer), Date: 22/05/2022, Time: 06:05:05pm
ဆွာ ရေတာရှည် ကေတုမတီ ကျွန်းကုန်း လေမိုးလျှပ်စီးမိုးကြိုး 🌧🌧🌧 Lightning: Cloud to ground, Power: 34kA (Strong slammer), Date: 22/05/2022, Time: 05:15:22pm
အနောက်တောင်မုတ်သုန်လေသည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်း၊ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တစ်ခုလုံးနှင့် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတောင်ပိုင်းတွေကို လွှမ်းခြုံရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြစ် မိုးကြီးရေလျှံနိုင်ပါတယ် Lightning: Cloud to ground, Power: -6kA (Medium roller), Date: 22/05/2022
၂၀၂၂ မေလ ၂၄ရက်နေ့မှ ၂၈ရက်နေ့အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ပဲခူးတိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မကွေးတိုင်း နေပြည်တော် မန္တလေးတိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်စစ်ကိုင်းတိုင်းတွေမှာ UAC 700mbar & 850mbar (UAC) ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး မိုးတွေရွာနိုင်ပါတယ်
မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် ကယားပြည်နယ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသတွေကတော့ မုတ်သုန်မိုးတွေရွာမှာဖြစ်လို့ အဆိပါရက်များအတွင်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ မိုးရွာမယ်လို့ဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်
မေလ ၂၅ရက်နေ့မှ ၂ရရက်နေ့အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မကွေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာ မိုးရွာနိုင်ပါတယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၂ရရက်နေ့မိုးရွာနိုင်ပါတယ်
ရွှေမိုး ငွေမိုး 🌧🌧🌧🌧🌧 အနောက်တောင်လေများက ကျောက်ဆောင်တွေကြားမှ ယူလာတဲ့ မိုးစက်ကလေးတွေ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ရွာသွန်းပေးမယ့်မိုးတွေလာပြန်ပါပြီနော် ၂၀၂၂လမေလ ၂၂ရက်နေ့ မှ ၂၈. ရက်နေ့အတွင်းမှာ ရန်ကုန်တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ပဲခူးတိုင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသတွေရဲ့အပေါ် မုတ်သုန်လေဆွဲတင်စနစ် UAC အထက်လေဝဲစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အညာမြေ မိုးနည်းရပ်ဝန်းတွေဆီသို့ မိုးများခေါ်ယူပေးပါလိမ့်မယ် ရက်ဝးရက်နီး update ခန့်မှန်းပေးနေပါမယ် Crd- စုစုစံ Su Su San
24/05/2022 ရကျနေ့ ဧရာဝတီတိုငျးတှငျ မိုးမြားစှာရှာသှနျးနိုငျပွီး မျောတငျ ဟိုငျးကွီး လပှတ်တာငပုတော ပုသိမျ ငရုတျကောငျးဂျေါရငျဂြီကြှနျး ငှဆေောငျခြောငျးသာ မိုးကွီးလထေနျနိုငျပါတယျ ISSUED TIME 22/05/2022 at 6:46PM
Dust Strom သဲမုနျတိုငျး မလေ ၂၃ရကျလ၂၄ရကျ ၂၅ရကျနမြေ့ားတှငျ ဆောဒီအာရေးဗီးယား အီရတျ ကူဝိတျ အီရနျ ဆ​ရေိးယား သဲကန်ဒာရဒသေတှမှော သဲမုနျတိုငျးပွငျပွငျထနျထနျတိုကျခတျနိုငျပါတယျ
ကော့သောငျး ဘုတျပွငျးခမောကျကွီး လုံဖော ကြေးရှာ ကရသူရိ တနင်ျသာရီ တညကျကြေးရှာ မွိတျ တိုရှာ ကကြေ်ကာရှာ ပုလောမွို့ ဒသေတှမှော မိုးကွီးရလြှေံနိုငျပါတယျ 🌧🌧🌧🌧
မှနျပွညျနယျ 🌧🌧🌧🌧🌧 သံဖွူဇရပျ ကြိုကျပိ ကရပ်ပိ အနငျးရှာ နှဈကရငျ ကလဂုတျကြှနျး လမိုငျး သောငျပွငျ လမေိုးလြှပျစီးမိုးကွိုး မိုး
ဒိုကျဦး ပွှနျတနျဆာ ညောငျလေးပငျ လမေိုးလြှပျစီးမိုးကွိုး မိုး Lightning: Cloud to ground, Power: 20kA (Strong slammer), Date: 22/05/2022, Time: 06:05:05pm
ဆှာ ရတောရှညျ ကတေုမတီ ကြှနျးကုနျး လမေိုးလြှပျစီးမိုးကွိုး 🌧🌧🌧 Lightning: Cloud to ground, Power: 34kA (Strong slammer), Date: 22/05/2022, Time: 05:15:22pm
အနောကျတောငျမုတျသုနျလသေညျ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတောငျပိုငျး၊ ကပ်ပလီပငျလယျပွငျတဈခုလုံးနှငျ့ ရခိုငျကမျးရိုးတနျးတောငျပိုငျးတှကေို လှမျးခွုံရောကျရှိနပွေီဖွဈပါတယျ
မှနျပွညျနယျ ရေးမွဈ မိုးကွီးရလြှေံနိုငျပါတယျ Lightning: Cloud to ground, Power: -6kA (Medium roller), Date: 22/05/2022
၂၀၂၂ မလေ ၂၄ရကျနမှေ့ ၂၈ရကျနအေ့တှငျး ရနျကုနျတိုငျး ဧရာဝတီတိုငျး ပဲခူးတိုငျး ရခိုငျပွညျနယျ မကှေးတိုငျး နပွေညျတျော မန်တလေးတိုငျး ရှမျးပွညျနယျစဈကိုငျးတိုငျးတှမှော UAC 700mbar & 850mbar (UAC) ဖွဈပျေါနိုငျပွီး မိုးတှရှောနိုငျပါတယျ
မှနျပွညျနယျ ကရငျပွညျနယျ ကယားပွညျနယျ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေတှကေတော့ မုတျသုနျမိုးတှရှောမှာဖွဈလို့ အဆိပါရကျမြားအတှငျး မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးမှာ မိုးရှာမယျလို့ဆိုရမညျဖွဈပါတယျ
မလေ ၂၅ရကျနမှေ့ ၂ရရကျနအေ့တှငျး ရခိုငျပွညျနယျ မကှေးတိုငျး မန်တလေးတိုငျးရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျးဒသေတှမှော မိုးရှာနိုငျပါတယျ စဈကိုငျးတိုငျး ၂ရရကျနမေို့းရှာနိုငျပါတယျ
ရှမေိုး ငှမေိုး 🌧🌧🌧🌧🌧 အနောကျတောငျလမြေားက ကြောကျဆောငျတှကွေားမှ ယူလာတဲ့ မိုးစကျကလေးတှေ တဈနိုငျငံလုံးကို ရှာသှနျးပေးမယျ့မိုးတှလောပွနျပါပွီနျော ၂၀၂၂လမလေ ၂၂ရကျနေ့ မှ ၂၈. ရကျနအေ့တှငျးမှာ ရနျကုနျတိုငျး ဧရာဝတီတိုငျး ပဲခူးတိုငျး
ရခိုငျပွညျနယျဒသေတှရေဲ့အပျေါ မုတျသုနျလဆှေဲတငျစနဈ UAC အထကျလဝေဲစနဈတဈခုဖွဈပျေါနိုငျပွီး အညာမွေ မိုးနညျးရပျဝနျးတှဆေီသို့ မိုးမြားချေါယူပေးပါလိမျ့မယျ ရကျဝးရကျနီး update ခနျ့မှနျးပေးနပေါမယျ Crd- စုစုစံ Su Su San
ကားပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ကားပေါ်ထိုင် နေစဉ် ကားခိုးခံမှု ဖြစ်ပွား
အီး (၁၀၂) လုံးပေါက်နိုင်တဲ့ အီးဘုရင်လေးလာပါပြီ